साबुनपानीले हात धुनु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय : डा. प्रियम्वदा पौड्याल - LIBJU BHUMJU
September 15, 2020 LBLeaveaComment on साबुनपानीले हात धुनु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय : डा. प्रियम्वदा पौड्याल
बेलायत सरकारको नीति ‘हेर्दै जाउँ’ भन्ने देखिन्छ । अहिले लिइएको नीतिले के कति फरक पार्छ त्यसअनुसार आवश्यक नीति लिने भन्ने देखिन्छ । यदि स्थिति सुधार भएन भने स्पेन, इटलीमा जस्तै कम्प्लिट लक डाउनको अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तो होला जस्तो देखिँदैन। तर यो नौलो किसिमको रोग भएकाले कतातिर जान्छ भन्ने अनुमान गर्न नै गाह्रो छ ।
(प्रस्तुत डाक्टर प्रिया पौड्यालज्यूको अन्तर्वार्ता आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), युकेकी अध्यक्ष प्रमिला लाबुङ राईबाट प्राप्त भएको हो । समय सान्दर्भिक र जनहितका निम्ति महत्वपूर्ण रहेको हुनाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रधान सम्पादक)
के तपाईको हत्केला चिलाउँछ? हेर्नुहोस् किन चिलाउँछ…
August 12, 2021 September 2, 2021 लिभु संवाददाता